Nzvimbo dzeSpain kutiza chando | Kufamba Nhau
10 nzvimbo muSpain kutiza chando chando
Susana Garcia | | Spain maguta, España, General
Isu tiri yakazara inotonhora wave, uye chokwadi ndechekuti isu tese tinoda kudzokera kumwaka wezhizha, kune iwo kupisa uye kumahombekombe mazuva. Kumusoro kuchamhembe, pakati nepakati pemakomo ndipo pavari kutonhora, uye zvirokwazvo vazhinji vari kutofunga nezvekugadzira nzvimbo yekuenda kunozorora kune imwe nzvimbo inodziya zvishoma. Ndokusaka tiri kuzokupa iwe mashoma mazano.
Kune nzvimbo dzakawanda dzinotipa kudziya kwakawanda pasina kubva kuSpain. Uye ndezvekuti isu tine nzvimbo dzakanaka dzekushanyira uye nzvimbo umo mamiriro ekunze anoperekedza zvishoma pane aya mazuva, kuti tikwanise kutiza chando chando. Cherekedza idzi gumi dzekushanyira dziri padyo kwazvo, kuti ugone kunakidzwa nemhepo inodziya uye funga nezve zhizha.
Cádiz iguta rakanaka kurasika mariri. Iine vanhu vanotibatsira kuti tinzwe kugadzikana, uye nharaunda yakare kwaunogona kuwana zvitoro zvidiki uye epakati nzvimbo maunogona kunwa pane terra uye muzuva. Kunyangwe zviri pachena kuti mamiriro ekunze haana kufanana nezhizha uye isu tinogona kusashamba mumvura yevakakurumbira Caleta pamhenderekedzoEhe, isu tinogona kuona idzi nharaunda dzese. Uye kana isu tiri vateveri vemitambo yemvura senge kitesurfing, isu tiri munzvimbo yakanaka.
Kana tikasiya peninsula tinogona kuenda kuCeuta, nzvimbo inosanganiswa nedzimwe tsika uye ine zvakawanda zvekutipa. Ona madziro ehumambo, iyo inotitakura kuenda kunguva dzakapfuura, kana kufamba-famba nepakati peMediterranean paki. Kune zvakare zviwi zvidiki padyo, sePerejil kana Santa Catalina. Tinogona zvakare kuenda kunofamba munzira kuMonte Hacho, uye isu tichavawo padhuze neMorocco, kana tichida kuita imwezve kutiza.
Melilla ndiro rimwe guta riri ku Africa kondinendi iri yeSpain, uye matinogona kunakidzwa nenguva inoyemurika yenguva ino yegore. Tinogona kufamba kuburikidza neHernandez Park, asi chimwe chezvinhu zvaro zvinonyanya kufadza kuona iyo XNUMXth century citadel. Iyo ichine matatu eaya mana epakutanga akavakirirwa masvingo. Dzimwe nzvimbo dzekuona ndeyePaza de España kana iyo Military Museum.
MuAlicante panguva ino kuchiri kutonhora, ichokwadi, asi kwete kutonhora semamwe maguta ari pakati kana kuchamhembe, saka inogona kunge iri zano rakanaka rekuzorora kwevhiki. Tinogona kukwira kune zvekare Nhare yeSanta Barbara, kubva pane kune zvinoshamisa maonero, uye uone chitsuwa cheTabarca, nzvimbo inovawo inofanirwa-kuona sezvo iri yepaki paki.
Ibiza ndeimwe yenzvimbo dzinonakidza dzatinowana munguva yechando. Iko hakuna yakawanda mhepo pachitsuwa ichi senge muzhizha, asi iri nzira yakasununguka yekuiona. Hatisi kuzoenda kumahombekombe asi isu tinogona kufamba chinyararire kuburikidza Dalt Vila uye mitengo ine chokwadi chekudonha zvakanyanya mumwaka wakaderera. Kune akawanda makona akanyarara, mataundi nemahombekombe ekuona pasina kuenda muzhizha, apo zvese zvakazara nevatashanyi.
Muzvitsuwa zveCanary tinowana imwe tsinga yekutiza nguva inotonhora yechando. Uye mune ino kesi isu tinogona kunyange kuenda kumahombekombe, nekuti tembiricha inogona kunge iri 25 madigiri pazviwi izvi. Fuerteventura ndomumwe wavo, pamwe nekushanyirwa kwekusungirwa gomo Tindaya, kana iro rakakurumbira Cofete beach. Iwe unogona zvakare kushanyira madhorobha madiki, senge El Cotillo, kana La Ampuyeta.
Lanzarote imwe nzvimbo inowanzo kuve yakazara muzhizha, asi inonakidzwa nemamiriro ekunze akanaka gore rese. Pachitsuwa ichi tinogona kunakidzwa nemahombekombe ejecha dema, asi zvakare kushanya senge Timanfaya yenyika paki, kana iyo Cueva de los Verdes, mugero wakagadzirwa neCorona Volcano.
Pachitsuwa cheTenerife isu zvakare tine yakanaka kupa gore rese kutenderera nemamiriro ekunze akanaka. Hatisi kuzonakidzwa chete nedziva repahotera, asiwo mahombekombe akadai sePlaya de Los Cristianos kana La Tejita. Iyo Teide kushanya Icho chinofanirwa, kukwira mumotokari yayo tambo kuti uve nemaonero asinganzwisisike echitsuwa. Tinogona zvakare kushanyira Loro Parque kana Siam Park, paki yemvura inonakidza kwazvo.
Isu tave kuenda kumaodzanyemba kwepeninsula, uye Malaga inogona kunge iri nzvimbo yakanaka mukati menguva yechando. Mamiriro ekunze achiri akanaka kunakidzwa ne Costa del Sol, asi kana pasina zuva remahombekombe, isu tine zvimwe zvinhu zvekuita, sekuona Alcazaba kana yeRoma Theatre.
Rimwe guta rekumaodzanyemba iro rinogona kutipa zvinhu zvakawanda zvinonakidza. MuSeville isu hatisi chete tinowana inonakidza nzvimbo yekare, asi kune akawanda mamaki ekuona, senge Giralda, iyo Torre del Oro kana iyo Alcazar chaiye.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » 10 nzvimbo muSpain kutiza chando chando
Maria del Mar akadaro
Ndine urombo asi wakanganwa kutaura Almería. Nhasi kuma18 masikati anga ari XNUMX degrees
Pindura kuna Maria del Mar
Gloria Rodriguez akadaro
Susana, ndinofanira kukuudza kuti Gran Canaria chitsuwa chinozivikanwa nekuve nemamiriro ekunze akanakisa pasirese nekuda kwemhepo dzekutengesa dzinoita kuti dzive netembiricha inofadza yegore rese uye kujekesa kuti Playa del Inglés haisi muTenerife asi muna Gran Canaria.
Pindura Gloria Rodríguez
Playa del Inglés haisi muTenerife asi kuGran Canaria, unofanirwa kutarisa nzvimbo
Handifunge kuti unoziva kuti iyo chaiyo COSTA DEL SOL INE ALMERÍA uko kune mamwe maawa ekupenya kwezuva pagore uye tembiricha yakagadzikana kwazvo gore rese. Anogara achitikanganwa. Zvinonyadzisa zvakadii kusaziva.
Ini handizive kwawakadzidza asi ini ndinokupa iwe 0 iwe wakanganwa ALMER whereA uko isu tine tembiricha yakanakisa mudunhu rese rekunze kunyangwe zvichirwadza vazhinji ...
Ana isabel guadalupe sanabria akadaro
Makore achapfuura uye isu ticharamba tichive zviwi zvine rombo rakanaka, asi zvakakanganwika, varume, gungwa reChirungu riri kuGran Canaria, uye neniwo handibvumirani nemashoko ekuti ndiro rakanakisa mhenderekedzo muzvitsuwa, chiwi chimwe nechimwe chine runako uye mahombekombe ayo anoshamisa. Zvinyorwe usati wanyora zvinyorwa. Ndatenda.
Pindura Ana isabel guadalupe sanabria
Uye chii chawanga uchindiudza nezve Las Canteras beach?
Gran Canaria kune imwe chete uye isina kufananidzwa.
Tiri kunakidzwa neakanakisa tembiricha.
Susana Garcia akadaro
Hongu, ndakanganisa izvo zvatogadziriswa. Ndine urombo kutadzira mumwe munhu dai zvainge zvakadaro asi kwete, ini handizive imwe neimwe yemapoinzi eSpain nemusoro. Zvisinei, Antonio, ndinofunga kuti pakanga pasina chikonzero chekutuka, nekuti tese tiri vanhu uye tinogona kukanganisa, handiti?
Pindura Susana Garcia
Shanyira Belfast neDublin
Shanyira London uye Edinburgh